လွတ်ပေးတဲ့အထဲကို ပါမလာခဲ့တဲ့မောင်လေးကြောင့် အကျဉ်းထောင်ရှေ့ကနေ စိတ်ဓာတ်ကျပြီးလှည့်ပြန်ခဲ့ရတဲ့ ပိုင်တံခွန်ရဲ့အမ မေစစ်သွေး – Shwe Yaung Media
မြန်မာမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုသာမက ထိုင်းမိန်းကလေးတွေရဲ့အချစ်တွေကိုပါသိမ်းပိုက်ထားတာကတော့ မော်ဒယ်ပိုင်တံခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကအထိ သူ့ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေက ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မမျှော်လင့်တဲ့အဖြစ်ဆိုးက ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ပိုင်တံခွန်ကတော့ အဲ့ချိန်ကတည်းကနေ မတရားမှုတွေကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြရင်း ထွက်ပြေးပုန်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့အတူ သူရဲ့နေအိမ်မှာ ဖမ်းဆီးခံရတာ အင်းစိန်ထောင်မှာယနေချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာပါ။
တစ်နိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေကလည်း သူ့ရဲ့မာကျောတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုချီးကျူးခဲ့ရပြီး ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှာလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ခုမှာဆိုရင် ပိုင်တံခွန်ဟာထိန်းသိမ်းခံရတာအချိန်တော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာ ကပရိသတ်တွေကပါသူလွတ်မြောက်ဖို့ဆုတောင်းနေခဲ့တာပါ။
သူ့အစ်မဖြစ်သူကလည်းလူမှုကွန်ရက်ကနေ “ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ရိုက်ချိုးခံရသော မျှော်လင့်ချက်လေး”ဆိုပြီးတင်ထားတာပါ။ “ သီတင်းကျွတ်လပြည့်မဟာအခါသမယမှာ…အားလုံး ဘေးဘယာ ကင်းဝေးကြပါစေ ဝေးကွာနေသူများ ပြန်ဆုံစည်းကြပါစေ
မင်္ဂလာရှိသော သတင်းကောင်းကြားရပါစေဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရသူများ လွတ်မြောက်ကြပါစေ။
မေမေလည်း အမြန်ဆုံးပြန်လည်ကျန်းမာလာပါစေ အသက်ရှူတိုင်း ငွေဝင်ပါစေ။ မင်္ဂလာရှိသော နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ…???? ” ဆိုပြီး ပိုင်တံခွန်ရဲ့အစ်မမှ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လြတ္ေပးတဲ့အထဲကို ပါမလာခဲ့တဲ့ေမာင္ေလးေၾကာင့္ အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕ကေန စိတ္ဓာတ္က်ၿပီးလွည့္ျပန္ခဲ့ရတဲ့ ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အမ ေမစစ္ေသြး
ျမန္မာမိန္းကေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ကိုသာမက ထိုင္းမိန္းကေလးေတြရဲ႕အခ်စ္ေတြကိုပါသိမ္းပိုက္ထားတာကေတာ့ ေမာ္ဒယ္ပိုင္တံခြန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ၁ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ကအထိ သူ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္ေၾကာ္ၾကားမႈေတြက ကမာၻအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့အျဖစ္ဆိုးက ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ပိုင္တံခြန္ကေတာ့ အဲ့ခ်ိန္ကတည္းကေန မတရားမႈေတြကိုဆန္႔က်င္ဆႏၵျပရင္း ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ က်န္းမာေရးမေကာင္းတာနဲ႔အတူ သူရဲ႕ေနအိမ္မွာ ဖမ္းဆီးခံရတာ အင္းစိန္ေထာင္မွာယေနခ်ိန္ထိ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရတာပါ။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးကပရိသတ္ေတြကလည္း သူ႔ရဲ႕မာေက်ာတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြကိုခ်ီးက်ဴးခဲ့ရၿပီး ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္မွာလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ခုမွာဆိုရင္ ပိုင္တံခြန္ဟာထိန္းသိမ္းခံရတာအခ်ိန္ေတာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာ ကပရိသတ္ေတြကပါသူလြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆုေတာင္းေနခဲ့တာပါ။
သူ႔အစ္မျဖစ္သူကလည္းလူမႈကြန္ရက္ကေန “ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္႐ိုက္ခ်ိဳးခံရေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလး”ဆိုၿပီးတင္ထားတာပါ။ “ သီတင္းကြၽတ္လျပည့္မဟာအခါသမယမွာ…အားလုံး ေဘးဘယာ ကင္းေဝးၾကပါေစ ေဝးကြာေနသူမ်ား ျပန္ဆုံစည္းၾကပါေစ
မဂၤလာရွိေသာ သတင္းေကာင္းၾကားရပါေစဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ၾကပါေစ။
ေမေမလည္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္က်န္းမာလာပါေစ အသက္ရႉတိုင္း ေငြဝင္ပါေစ။ မဂၤလာရွိေသာ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ျဖစ္ပါေစ…???? ” ဆိုၿပီး ပိုင္တံခြန္ရဲ႕အစ္မမွ သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်များ ပူတာအိုသို့လာမည်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ချိန်တွင် တိုက်ပွဲဝင်ရန်အသင့်ဖြစ်နေ‌ပြီဟု ပူတာအို PDF ကြေညာ